‘मेरो जुँगा मन पराउने धेरै छन्’ – निशान भट्टरार्इ - www.kchhakhabar.com
‘मेरो जुँगा मन पराउने धेरै छन्’ – निशान भट्टरार्इ
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन ०६, २०७४ समय: १३:११:४६
मोरङ, उर्लाबारीका निशान भट्टराई, नेपाल आइडलका उत्कृष्ट तीनमा परेका प्रतिष्पर्धी हुन् । सानैदेखि गाउन थालेका निशानले गायक बन्न धेरै संघर्ष गरे । त्यहिक्रममा नेपाल आइडलम भिडेका उनि अहिले दर्शकका प्रिय बनेका छन् । यतिबेला निशानलाई फोन गर्ने, म्यासेज पठाउने मात्र होईन उनको फोटो र डमीमा समेत सेल्फि खिच्ने, चुम्मन गर्नेहरु धेरै भेटिन्छन् । प्रस्तुत छ, निशानसँगको रमाईलो कुराकानी ।।
फ्यानहरु त धेरै रहेछन् । गर्लफेन्ड चाहिं कति छन् ?
छैन, अहिलेसम्म ।
प्रस्तावै आएन ?
प्रस्ताव त कति कति । आएका आयै छन् । गीत प्राक्टिस गर्दापनि फोनले नै डिस्टर्ब गर्छ । फोनले गर्दा आफ्ना विशेष काम भ्याउनपनि गाह्रो हुन्छ ।
फोन गरेर के भन्छन्, केटीहरुले ?
मलाई धेरै मन पर्छ । रुपपनि मन पर्छ, सिंगिङ पनि मन पर्छ भन्छन् । विशेष त जुँगा मन पर्छ अरे ।
बिहे गरौं भन्नेहरु कति छन् ?
फेसबुकतिर पनि बिहे नै गर्छु भनेर लेख्नेहरुपनि छन् । तर मैले केही भनेको छैन उनिहरुलाई ।
त्यस्तो भन्दा खुसी लाग्छ ?
खुसी नै लाग्छ । मेरो मेहनतलाई माया गरेको जस्तो लाग्छ ।
साथीहरुसँग सम्बन्ध कस्तो छ ?
हामी त सँगै सुत्छौं । सुत्दा घरी खुट्दा काँधमा पुगेको हुन्छ, घरी जीउमा । कहिले काहिं एउटा साथी खाटबाट झरिसकेको हुन्छ । बाहिरको कुरा सुन्दा त हामीसँगै बसेको पनि थाहा छ कि छैन जस्तो लाग्छ ।
बाहिरका कुरा सुन्दा कस्तो लाग्छ ?
एक त हामी पाँच महिनादेखि क्लोज क्याम्पमा छौं । बाहिर कसैसँग कुराकानी, भेटघाट गर्न पाएका छैनौं । बाहिर हल्ला गर्नेहरुलाई पनि थाहा छैन, यहाँ हामी तीन जना कति मिलेर बसिरहेका छौं भन्ने कुरा । हामीलाई एउटा कुनै निश्चित क्षेत्र, जात, भाषा भाषी भन्दा पनि एउटा राष्ट्रको कलाकारका रुपमा हेरिदिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्छु ।
हामी प्रतिष्पर्धीलाई नै कलाकारको सम्बन्धले जोडेर राखेको छ । हामीबीच नराम्रो सम्बन्ध छैन । हामी तीन जातीका भएपनि जातको कुरा कहिल्यै आउँदैन भने तपाईहरु यो कुरालाई लिएर किन बहस र डिस्कस गर्नुहुन्छ । यस्ता कुरा नगरिदिए नै हामीलाई पनि खुसी लाग्छ । हामी त्यस्तो सोंच मै छैनौं । हामी यस्तो कलाकार बन्न चाहान्छौं जसले सबैको माया पाओस् । हामी तीनै जना एउटा राष्ट्रको कलाकार हुन चाहान्छौं ।
साथीहरु प्रतियोगीताबाट बाहिरिंदा हुँदा कस्तो अनुभव हुन्छ ?
तीन जनामा जसले जीतेपनि एकदम ठीक छ । एलिमिनेटको समयमा सँगै मिल्ने साथी सँगै उभिएका हुन्छौं । त्यस्तो बेला साथी पो आउट हुने हो कि, बरु म भन्दा साथी नै छानिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । एकातिर छानिएको खुसी हुन्छ, अर्कातिर साथी आउट भएको पीडा हुन्छ ।
नेपाल आइडलपछिको योजना के छ नि ?
संगीतमै भविष्य खोज्दै म काठमाडौं आएको हुँ । मेरो त्यो सपनामा नेपाल आइडल सबैभन्दा ठूलो माध्यम बन्यो । यसले मलाई धेरै ठूलो सहयोग पुग्यो । त्यसैपनि म संगीतमै हुन्थें अब त झन नेपाल आइडलले सहज बनाईदिएको छ । यसैलाई अझ जोड दिएर अगाडी बढाउँछु । नेपाल आइडलले संगीतमा गर्ने संघर्षको बाटो छोट्याईदिएको छ ।